I-TZXDuino: Ibhodi le-Arduino ku-Cassette le-ZX Spectrum Software | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-TZXDuino: ibhodi le-Arduino kwikhasethi le-software ye-ZX Spectrum
Kukhona eziningi abasebenzisi be-retro abathanda ikhompyutha. Abaqoqi abangamaqiniso abaphatha ukuthenga noma ukubuyisela imishini yasendulo yenganekwane. Ukushisekela ama-chips kaZilog's Z80, Apple Classic, noma eminye imishini yasenganekwaneni eyayikhona esikhathini esedlule, njenge-ZX Spectrum, noma i-Amstrad, i-Atari, i-Commodore, nokunye okuningi. Yebo, bonke kufanele bazi ngephrojekthi ye-TZXDuino esizokhuluma ngayo kulesi sihloko.
Kokunye okuthunyelwe sibonise izindatshana zokubuyisa amagama wamavidiyo we-retro futhi siwasebenzise abalingisi. Ngalesi sikhathi sizokhuluma ngokuthi yini leyo TZXDuino, kuhlangene ngani ne-Spectrum kanye ne-Arduino, njll.
1 I-ZX Spectrum
2 Yini i-TZXDuino?
2.1 Ukwakha i-TZXDuino yakho uzodinga
Ifemu yaseBrithani Ucwaningo lweSinclair idale enye yamakhompyutha adume kakhulu futhi lokho kuyisimangaliso kubathandi be-retro. YiZX Spectrum eyayizongena emakethe ngo-Ephreli 23, 1982.
Ikhompyutha eyi-8-bit esekelwe kuma-microprocessor adumile I-Zilog Z80A. Ngaphezu kwalokho, kuzoba ngenye yamakhompiyutha athandwa kakhulu ekhaya eYurophu ngalesi sikhathi.
Imishini elungiselelwe futhi ehlanganisiwe yesikhathi engajabulisa i- abalandeli bekhompyutha namavidiyo yalesi shumi leminyaka, futhi okuyisicucu semnyuziyamu nanamuhla. Eqinisweni, labo abangenayo inhlanhla yokuthola i-hardware yangempela, banelisekile ngama-clones noma ama-emulators ukuze baqhubeke nokuvuselela isoftware yabo.
Ku-ZX Spectrum kuzoba nezinguqulo eziningana, ngaphezu kwezinye ama-clones kanye nokuphuma okuvelile kunikezwe impumelelo yalo mkhiqizo obe kunezinhlelo zokusebenza ezihambisanayo eziningana.
Ngokuqondene ne i-hardware yangempela, izici bezinkulu impela ngaleso sikhathi:
CPU: Zilog Z80A at 3.5 Mhz and 8-bit for its data bus and 16-bit for the bus bus, ukwazi ukuphatha inkumbulo eyengeziwe.
Memoria- Ungakhetha phakathi kokulungiselelwa okubili kwe-RAM. Uhlobo olushibhile lwe-16 kB futhi olubiza kakhulu ngama-48 kB. Lokho bekufanele kungezwe ku-16 kB ye-ROM ebifaka njengesisekelo. Leyo ROM ibandakanya utolika we-BASIC.
Ikhibhodi: irabha ihlanganiswe kukhompyutha kwezinye izinhlobo.
Isitoreji: Magnetic cassette tape system efanayo naleyo esetshenziswa ohlelweni oluvamile lomsindo. Imininingwane ingafinyelelwa ngesivinini esingu-1500 bit / s ngokwesilinganiso. Ngakho-ke, umdlalo wevidiyo cishe wama-48 kB uthathe cishe imizuzu emi-4 ukulayisha. Yize eminye imidlalo ibisebenzisa imodi ye-turbo ukukhuphula isivinini. Ngaphezu kwalokho, unyaka ngemuva kokwethulwa kwe-Spectrum, uSinclair wakhipha i-ZX Interface I, eyayingaxhuma kuma-tape asheshayo angama-8 abizwa ngama-microdrives anejubane lika-120.000 bit / s.
Imidwebo: uhlelo lwayo lwehluzo lungaphatha i-matrix efinyelela ku-256 × 192 px. Yize ukulungiswa kombala bekungama-32 × 24 kuphela, namaqoqo wamaphikseli angama-8 × 8 nolwazi lwemibala noma izimfanelo ezinjengombala ongemuva, umbala wenki, ukukhanya nokukhanya.
Yiqiniso, eziningana izitho zangasese ukwengeza kule khompyutha. Hhayi i-ZX Microdrive kuphela, kodwa futhi nezinye izixhumi zediski ezifana neBeta Disk, DISCiPLE, OPUS Discovery, izitayela, amagundane (iKempston Mouse, Star Mouse, AMX Mouse,…), amaphrinta, abalawuli begeyimu yevidiyo njengezinti zokuthokozisa, njll.
Ngo-1986, iSinclair Research yathengisa umkhiqizo wayo nemikhiqizo yayo kwa-Amstrad, okungezinye zomlando. Kepha, uma ngabe ubungazi, iSinclair Research Ltd. isekhona njengenkampani namuhla ...
Futhi konke lokhu kwephupho lombonisi ogama lakhe Mnumzane Clive Sinclair, umsunguli waseLondon, unjiniyela nosomabhizinisi ababenalo mbono omuhle wokuthengisa amakhompyutha amancane ekhaya. Futhi into enhle kakhulu ukuthi ungaqhubeka nokuzijabulela ngamaphrojekthi afana ne-TZXDuino engikukhombisa wona ngezansi ...
Kuyiqiniso ukuthi unama-emulators onawo, kanye nokuthenga noma ukubuyisela imishini yoqobo ye-Spectrum oyithola emakethe esezandleni zakho. Ngaleyo ndlela, uzoba nehardware ukuze ukwazi ukusebenzisa imidlalo ye-retro yevidiyo nesoftware njengakuqala. Kepha akuwona wonke umuntu ongayithola, futhi kulapho TZXDuino kuthatha ukufaneleka kwayo.
Ake ucabange indawo ebiyelwe efana neteyipu yekhasethi, enebhodi yokuthuthuka ngaphakathi futhi ekwazi ukusebenzisa isoftware yasekuqaleni ye-ZX Spectrum oyigcine ikhadi le-MicroSD. Yilokho ngokuyisisekelo ongaba nakho njenge-TZXDuino. Ayinayo i-hardware yangempela, kepha kukhona okuthile uma ungathandi ama-emulators ...
Labo ababhekele le phrojekthi Andrew Beer noDunan Edwards, okuthe kusasa nangomcabango wakwazi ukubeka konke ngaphakathi kweteyipu yekhasethi. Ngakho-ke ungaba nedivayisi encane ezandleni zakho yokuvusa zonke lezo zinhlelo ezinganekwane ze-80-90 ze-Spectrum.
Uma uzibuza ngemininingwane yezobuchwepheshe yokuthi yadalwa kanjani, iqiniso ukuthi bekukhona ngokususelwa ku-arduino. Ngakho igama layo. Futhi uma ufuna eyodwa futhi unomphefumulo womenzi, unga dala ikhasethi lakho le-DIY. Kulesi sixhumanisi uzothola i-PDF equkethe yonke imiyalo yokuhlangana kwezinto ze-elektroniki. Futhi iqiniso ukuthi akuyona inqubo eyinkimbinkimbi ngokwedlulele futhi ende ...
Ukuphela kwento eyinkimbinkimbi enayo ukuthi idinga ikhono elithile lokuhlanganisa konke ngaphakathi nokuthi unakho okuhle amakhono okunamathisela i-tin.
Kunoma yikuphi, ngiyaqiniseka ufunda okuningi ngesikhathi senqubo ukwakhiwa nobumnandi uma sekuhlanganisiwe kuzoqinisekiswa ...
Ukwakha i-TZXDuino yakho uzodinga
Ungakwazi thenga zonke izinto kalula ezitolo ezikhethekile noma ku-Amazon, njenge:
Imodyuli yokufunda ikhadi le-MicroSD
I-PAM8403 2X3W Amplifier Board
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-TZXDuino: ibhodi le-Arduino kwikhasethi le-software ye-ZX Spectrum
Imoto kagesi: konke odinga ukukwazi
I-ASUS Tinker Board: konke odinga ukukwazi